August | 2009 | သီရိရတနာ
By Thet Nandar • Posted in 21 Months - Baby watching, Henry, Pet - Puppy	• Tagged Henry, Pet, Photo, Puppy
သမီးလေးကို တစ္ဆေ၊ သရဲ အကြောင်းတွေ ရှင်းပြရင်း အဖိုး ဖြစ်သူ (မာမီ အဖေ) ဦးနန္ဒ ရေးသား စီစဉ် ထုတ်ဝေတဲ့ ဦးနန္ဒ (၀ိဇ္ဖာဂုဏ်ထူး) ဒီဂျေ ရဲ့ ဘုံဘ၀ ပုံပြတရားတော် စာအုပ်ကို ဖတ်ပြ ရှင်းပြခဲ့တယ်။ ဘဘ … က မာမီတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ်မှာ မြန်မာစာ ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ပေါ့။ နောက်တော့ ပင်စင်ယူပြီး ဘာသာရေး စာအုပ်တွေ ရေးသား ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချီခဲ့တာ ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိပါပဲ သမီးလေး။
စာအုပ်က စာမျက်နှာ ၄၉ မှာ
ပြိတ္တာ ဘ၀သို့ ရောက်ရှိလာကြရခြင်းဟာ ရှေးက မိမိတို့ ပြုခဲ့ဖူးတဲ့ အကုသိုလ်ကံ တစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်လာကြရပါတယ်တဲ့။ တချို့လဲ ငရဲဘ၀မှာ ကြာရှည်စွာ ခံစားကြရပြီးမှ ပြိတ္တာဘ၀သို့ ရောက်ရှိလာကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့လဲ လူ့ဘ၀တုန်းက ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ များစွာ ပြုခဲ့ကြပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် သေခါနီဆဲဆဲမှာ သားသမီး သံယောဇဉ် ပစ္စည်းသံယောဇဉ် စွဲလမ်းမှုနဲ့ သေဆုံးခဲ့ကြတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ အိမ်အနီးအပါးမှာပဲ ပြိတ္တာဘ၀ဖြစ်ပြီး နေကြရရှာပါသတဲ့။ သူတို့ အဖို့ကတော့ ကုသိုလ် ကောင်းမှု ပြုပြီး အမျှအတန်းဝေလို့ သာဓုခေါ်နိုင်ခဲ့ယင်တော့ ပြိတ္တာဘ၀မှ ကျွတ်လွှတ်နိုင်ပြီး လူပြန်ဖြစ်ဖို့ နီးစပ်လှပါသတဲ့။
By Thet Nandar • Posted in Book, TND's father	• Tagged ဗုဒွဘာသာ ပုံပြတရားတော်, Book, Religion
သမီးနဲ့ သားသား သီတင်းကျွတ်မတိုင်ခင် မီးရှုး မီးပန်း ဆော့နေကြတာ။ ရှုးဒိုင်း မီးပန်းကတော့ ပြူတင်းပေါက်ကနေ ဖောက်ရမှာ။ ဓာတ်ပုံတော့ မရိုက်တော့ဘူး။ ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ ဆိုတော့ ကင်မရာ ကိုင်လို့ ရမှာ မဟုတ်လို့ မာမီ ဓာတ်ပုံ ရိုက်မထားတာပါ။
ပထမ မမ ကစားတာကို သားက ဘာမှန်းမသိသေးတော့ ခပ်ဝေးဝေးကနေ ကြည့်နေတာပေါ့
အခုက လက်က ကိုင်ဆော့တဲ့ မီးပန်း ကို သမီးက ဆော့နေတာ မြင်တော့ သားသားက စိတ်ဝင်စားပီး ကိုင်ကြည့်ချင်နေတာ။ ပေးတော့ မကိုင်ပါဘူး။ နောက်တခုက လိပ်ပြာ ဖျောက်အိုးက မီးရှို့ ယုံပဲ ရှိသေးတယ်။ ရှူးဒိုင်း …. ဗျောင်းပဲ။ မြန်ချက်က ဓာတ်ပုံတောင် ရိုက်မရ။ ဗျောက်အိုး သေနတ်၊
ယမ်းငွေ့တွေကို သားတော်မောင် လေမှုပ်နေတာ။ သူမှုပ်ထုတ်လိုက်ရင် ယမ်းငွေ့ ပျောက်မယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်လေးနဲ့။
ဗျောက်အိုး ဆော့ရလို့ ပျော်နေသော သားတော်မောင်
By Thet Nandar • Posted in 21 Months - Baby watching, Play in home	• Tagged Brother & Sister, Photo, Play in home
ခါကာဘိုရာဇီတောင်ထိပ်ပေါ် လေ့လာရေး ခရီး သွားရောက်ခဲ့တဲ့ I.L.B.C မှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာများ ဓာတ်ပုံ
“Comment” ကနေ လာမေး ထားတာကို ဖြေပေးရင်းနဲ့ မိသားစု ဘလော့လေးမှာ မှတ်ထားလိုက်တာပါ။ ကျောင်းဝပ်ဆိုဒ်လင့်တွေလည်း ပြန်ရှာတဲ့အခါ အထောက်အကူ ဖြစ်နေအောင်လို့လေ။
ကွန်မန့်ကနေ မေးထားတဲ့ ပိုစ်
I.L.B.C မှာ Primary2ကို နှစ်စဉ်ကြေး (Admin Fees) = 40,000 + ကျောင်းလခ (242,000/months)
ပထမ တစ်သုတ်က ၃ လစာ ရှင်းရသည် = 726,000 ကျပ် (Jun to Aug) ၊
End of December ကျမှ နောက်ဆုံး အသုတ် ငွေသွင်းရမှာပါ3လစာ (242,000 *3 = 726,000 ကျပ် ) .
အားလုံး စုစုပေါင်း တစ်နှစ်စာ (ကျောင်းတက် ၁၀လ) မြန်မာငွေ ၂၄ သိန်း ၆ သောင်းပါ။ စာအုပ်ဖိုး အပီးအစီးပါ။ အခြား အပို ထပ်မကုန်ပါ။
စတုတ္တက ILBC လို့ပဲ ပြောချင်ပါသည်။ 😀
အပေါ်ဆုံးက ၂ကျောင်းက တစ်နှစ်စာ သိန်း ရာကျော် ရှိသည်။ တတိယက ILBC ထက် ဆယ်ဂဏာန်းကျော် ပိုပေးရပါသည်။
နောက်ထပ် နာမည်ကြီးတွေက …
Diplomic School Yangon (school web site ရှာမတွေ့လို့ Diplomic School – facebook fun)
ဓာတ်ပုံကို ILBC School web site link Photo Gallery မှ ယူထားသည်။
By Thet Nandar • Posted in I.L.B.C	• Tagged I.L.B.C
By Thet Nandar • Posted in 20 Months - Baby play ironing, Henry, Play in home	• Tagged Henry, Photo, Play in home